မင်္ဂလာ Bloggoween! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 30, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ပွဲနေ့များနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များတွင်လူအများစုကသူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုအလှဆင်မထားကြခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ငါ့သားသည်လူဟောင်းတစ် ဦး အဖြစ်ဝတ်စားဆင်ယင်ခဲ့သည် (သူသည် Goodwill ၌ IHOP Cardigan ကိုပင်တွေ့ခဲ့ရပြီး) ကျွန်ုပ်၏သမီးသည် Emo Psycho Killer လူငယ်ဇာတ်စင်တွင်ရှိသည်။
30:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 17
30:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 44
ငါတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ oh ဤမျှသိသာမှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ .. ရိုးသားငါ won't လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 01
Hmmm, Frankenstein စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံ၌။ Mary Shelly စဉ်းစားတွေးတောမည့်အရာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ Thanksgiving and Christmas အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုသာကျွန်တော်မှန်းဆနိုင်သည်။
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 40
ဂျေဆန် (Bean Cup)
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 32
အနည်းဆုံးတော့ယခုသင့် ဦး နှောက်ကိုရွေးချယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 01
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 49
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 25
31:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 51
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 26
သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကကူးစက်ခံရနိုင်သည့်ဖြတ်တောက်မှုကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။ Gangrene? မင်္ဂလာဟယ်လို
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 09
RSS reader ကိုရံဖန်ရံခါဘေးဖယ်ထားပြီးအကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂ်ကိုတကယ်လာရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိစ္စတစ်ခုကိုသင်လုပ်ပြီးပြီ။ ငါလုံးဝဒီလွဲချော်ကြလိမ့်မယ်! ဒီနေ့ငါပြခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးရယ်မောမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
31:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 49
ငါဟယ်လိုဝင်းအတွက်ငါတို့ဘလော့ကိုမ ၀ တ်ခဲ့ဘူး၊ ငါ 'e-team' အဖြစ်ဝတ်ဆင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏ဓာတ်ပုံကိုတင်ခဲ့သည်။
31:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 01
ဒါအရမ်းအေးတာပဲ! အလုပ်လုပ်ရန်ပျော်စရာဆိုင်လေးတစ်ခုနှင့်တူသည်! ကျွန်ုပ်သည်ပိုက်ကွန်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းသိသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
31:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 29
ယုံချင်ယုံမယုံနဲ့၊ မနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းမှာငါတို့စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အတူတူဆွဲလိုက်တာအံ့သြမိပါတယ်
31:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 37
31:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 19
သင်မှာ .... ရှိသည် အဘယ်သူမျှမ ဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူး Sterling!
31:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 11
Wow, အားလပ်ရက် themes များတကယ်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ငါဒီမှာအနည်းငယ်စာဖတ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ bloggoween post ကနောက်ဆုံးမှာမှတ်ချက်ပေးဖို့၊ ငါ့ကိုယ်ပိုင်စုန်းအသစ်နှစ်နှစ်စိတ်ဓာတ်ကိုငါ့ဘလော့ဂ်ထဲထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ သတိပေးချက် - အလုပ်အတွက်လုံခြုံမှုမရှိပါ - (ကျွန်ုပ်တို့သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးကိုရောင်းသည်၊ သို့သော်ဘလော့ဂ်သည်ညစ်ညမ်းမဟုတ်ဘဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအာရုံစိုက်ဆဲဖြစ်သည်) ပျော်ရွှင်သော Bloggoween၊ Spooky Custom Adult Stores များအောင်မြင်ပါပြီ.